स्याङ्जा, कास्की, गोरखा र नवलपुरमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा १६ जना घाइते - Kendra Khabar
स्याङ्जा, कास्की, गोरखा र नवलपुरमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा १६ जना घाइते
२०७७, ११ पुष शनिबार १८:१६
पोखरा । स्याङ्जा, कास्की, गोरखा र नवलपुरमा शनिबार भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् । स्याङ्जा पुतलीबजार –११ बगालथोक नजिकै सिद्धार्थ राजमार्गमा भएको बस दुर्घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् ।
अर्जुनचौपारीबाट पोखराका लागि छुटेको ना ५ ख ५१३९ नंं को बस र पोखराबाट वालिङका लागि छुटेको लु १ ख ६५९४ नं. को ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाँदा ट्रक चालकसहित १२ जना घाइते भएका हुन् । उनीहरु मध्ये ९ जनाको जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा र तीन जनाको पोखरामा उपचार भइरहेको भइरहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ ।
शनिबार नै पोखरा–२६ अर्घौचोकमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जना घाइते भएका छन् । ग १० प ७२३ नं.को स्कुटर आफैं अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा त्यसका चालक पोखरा–१२ की ४७ बर्षीया बुद्धिमाया विक र पछाडि सवार पोखरा–१० बस्ने ४७ बर्षीया सोनु मानन्धर घाइते भएका हुन् । दुबै जनाको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ ।
यसैगरी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ थानिथान स्थित भित्री सडक खण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा एक जना घाइते भएका छन् । ना ६ त ५८६२ न. को ट्याक्टर अनियन्त्रित भई तल खस्दा त्यसका चालक गोरखा सिरानचोक –६ नयाँसाँघुका २४ बर्षीय रोशन परियार घाइते भएका हुन् । उनलाई उपचारका लागि चितवन पठाइएको छ ।
नवलपुरको कावासोती –१६ सातघरे स्थित भित्री सडकखण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि एक जना पैदल यात्री घाइते भएका छन् । उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जाँदै गरेको लु २४ प ६७२६ नं. को स्कुटरले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा सोही ठाउँका ५ बर्षीय बालक आयोग टण्डन घाइते भएका हुन् ।
उनको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल डण्डा डण्डामा उपचार भइरहेको छ । सबै दुर्घटनाको अनुसन्धान भइरहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार थिङले जानकारी दिए ।